တစ်ဦး HARD DRIVE ကိုနှင့်အတူစီအာစီအမှား FIX လုပ်နည်း - HARD DISK ကို - 2019
စီအာစီ hard drive ကိုအမှားအယွင်းများကို fix
ဒေတာကိုအမှား (စီအာစီ) built-in hard drive ကို, ဒါပေမယ့်လည်းတခြားသိုလှောင်ရေးကိရိယာမှအတူမသာဖြစ်ပေါ်: ကို USB flash ကို, ပြင်ပ HDD ။ ဤသည်များသောအားဖြင့်အောက်ပါကိစ္စများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်: torrent ကနေတစ်ဆင့်ဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည့်အခါ, ဖိုင်များကူးယူခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်း, ဂိမ်းများနှင့်အစီအစဉ်များထည့်သွင်းပါ။
စီအာစီအမှားများကို fix ရန်နည်းလမ်းများ
စီအာစီအမှားဟာ checksum ဖြစ်သင့်ကြောင်းတမကိုက်ညီဆိုလိုသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဖိုင်ကိုပျက်စီးသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲသွားတယ်, ဒါကြောင့်ပရိုဂရမ်နဲ့ကကိုင်တွယ်လို့မရဘူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမှားအဖြေတစ်ခုဖွဲ့စည်း, ဖြစ်ပေါ်ပြီးသောအောက်ရှိအခြေအနေများပေါ် မူတည်. ။
Method ကို 1: တစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင် installation ဖိုင်အသုံးပြုခြင်း / ပုံရိပ်
ပြဿနာ: သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာပေါ်ဂိမ်းသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကို install လုပ်သည့်အခါသငျသညျစီအာစီအမှားဖြစ်ပေါ် image ကိုရေးဖို့ကြိုးစားပါ။
ဖြေရှင်းချက်: ဖိုင်ကိုဒဏ်ရာကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ကြောင့်ဤသည်များသောအားဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကဥပမာ, မတည်မငြိမ်အင်တာနက်ကိုအကျင့်ကိုကျင့်ဖြစ်ပျက်နိုင်ဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျတဖနျ installer ကို download လုပ်ပါဖို့လိုပါတယ်။ လိုအပ်သောလျှင်, သင်ဒေါင်းလုပ်ရသောအခါအဘယ်သူမျှမချိုးကွန်နက်ရှင်ရှိကွောငျး, ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာသို့မဟုတ် torrent-program ကိုသုံးနိုင်သည်။
re-ဒေါင်းလုတ်ဆွဲတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအရင်းအမြစ်ကို download ( "မှန်" သို့မဟုတ်ခြောငျး) ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါကအပြီးပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့သည်တဲ့အခါမှာအပြင်, ဒေါင်းဖိုင်ကိုကိုယ်တိုင်ကဒါပျက်စီးနိုင်ပါသည်။
Method ကို 2: Disk ကိုအမှားစစ်ဆေးနေ
ပြဿနာ: တစ်ခုလုံးကို disc ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသို့မဟုတ်လုံးဝမပြဿနာများနှင့်အတူမတိုင်မီအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးသော hard disk ကို installers တွင်သိမ်းထားသောအလုပ်လုပ်ကြပါဘူး။
ဖြေရှင်းချက်: အဆိုပါ HDD file system ကိုကျိုးသည်သို့မဟုတ်ပါက (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ယုတ္တိ) ကဏ္ဍကျိုးပဲ့လျှင်ဤပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ မကောင်းတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍများရှိပါတယ် အကယ်. ဆုံးမခြင်း, ထို့နောက်အခြေအနေကိုကြွင်း hard disk မှာအမှားဆုံးမပဲ့ပြင်အစီအစဉ်ကို အသုံးပြု. ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်မရနိုင်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေထဲကတစ်ခုမှာတော့ကျနော်တို့ဖိုင်စနစ်ကပြဿနာတွေနဲ့ HDD ကဏ္ဍများကို fix ဖို့ဘယ်လိုပြောပြသည်ပါပြီ။
အသေးစိတ်: အ hard drive ကိုအပေါ်ကျိုးကဏ္ဍ restore2နည်းလမ်းများ
Method ကို 3: torrent ရှာဖွေရေး၏မှန်ကန်သောဖြန့်ဖြူး
ပြဿနာ: သငျသညျ installation ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးတဲ့ torrent ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
ဖြေရှင်းချက်: အများစုမှာဖွယ်ရှိ, သင်ကဒါခေါ် "ခေတ်သုံးလက်။ " ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါပြီ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျခြောငျး-က်ဘ်ဆိုက်များ၏တဦးတည်းအတွက်တူညီတဲ့ဖိုင်ရှာဖွေနောက်တဖန် Download ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါပျက်စီးဖိုင် hard disk ထဲကနေဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
Method ကို 4: CD / DVD ကိုစစ်ဆေးမှု
ပြဿနာ: သင်သည်သင်၏ CD / DVD ကို drive ထဲမှဖိုင်များကိုကော်ပီကူးရန်ကြိုးစားသည့်အခါစီအာစီအမှားပေါ်လာမှာပါ။
ဖြေရှင်းချက်: disc ကို၏ပျက်စီးသွားသောမျက်နှာပြင်, အများစုမှာဖွယ်ရှိ။ ဖုန်မှုန့်, ဖုန်နှင့်ခြစ်များအတွက်စစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွင်းမှုနှင့်အတူဘာမျှလုပ်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်။ သတင်းအချက်အလက်များအလွန်လိုအပ်ပါကပျက်စီးသွားသော disk တွေကနေဒေတာတွေကိုပြန်လည်များအတွက် tool ကိုသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။